Duulimaadka Toronto ilaa Mont-Tremblant ee Porter Airlines hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadka Toronto ilaa Mont-Tremblant ee Porter Airlines hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • News • Dadka • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadka Toronto ilaa Mont-Tremblant ee Porter Airlines hadda.
In ka yar 70 daqiiqo, rakaabku waxay ka duuli karaan Gegida Diyaaradaha ee Billy Bishop Toronto una socda Madaarka Caalamiga ah ee Mont-Tremblant.
Adeegga xilliyeedka ee Porter Airlines wuxuu bilaabmayaa Disembar 17 wuxuuna socon doonaa illaa Maarso 28, 2022.
Duulimaadyada isku xidha ayaa sidoo kale laga heli karaa meelo kala duwan oo Porter Airlines ah ee Kanada.
Dhammaan rakaabka da'doodu ka weyn tahay 12 sano iyo afar bilood ee ka dhoofaya madaarka Kanada waa inay keenaan caddaynta tallaalka ka hor intaysan fuulin, dhaqangal ah Noofembar 30.
Porter Airlines waxay dib u soo celinaysaa adeeggeedii xilliyeed ee Mont-Tremblant, Que., wakhtiga fasaxyada. Adeegga xilliyeedku wuxuu bilaabmayaa Diseembar 17, isagoo socda illaa Maarso 28, 2022.
"Waxaan diyaar u nahay inaan ku laabano halka aan u socono xilliyeedka ugu horreeya tan iyo markii aan dib u howlgelinay bishii Sebtembar," ayuu yiri Michael Deluce, madaxweynaha iyo maamulaha, Porter Airlines. "Mont-Tremblant waxay ka mid ahayd meelaha ugu horreeya ee Porter markii la aasaasay diyaaradda, rakaabkayagu waxay ku raaxaystaan ​​noocyada kala duwan ee hawlaha jiilaalka ee ay bixiso."
In ka yar 70 daqiiqo, rakaabku waxay ka duuli karaan Gegida Diyaaradaha ee Billy Bishop Toronto una socda Madaarka Caalamiga ah ee Mont-Tremblant. Duulimaadyada isku xidha ayaa sidoo kale laga heli karaa meelo kala duwan oo Xamaaliga ah. Jadwalka jiilaalka waxaa ku jira ilaa afar duulimaad todobaadle ah.
Iyadoo la raacayo amarka tallaalka ee dawladda Kanada ee rakaabka hawada, dhammaan rakaabka da'doodu ka weyn tahay 12 sano iyo afar bilood ee ka dhoofaya madaarka Kanada waa inay keenaan caddaynta tallaalka ka hor intaysan fuulin, dhaqangal ah Noofembar 30.
Duuliyaha Diyaaradda waa diyaarad goboleed xarunteedu tahay Billy Bishop Toronto City Airport ee Toronto Islands Toronto, Ontario, Canada. Waxaa iska leh Porter Aviation Holdings, oo hore loo yiqiin REGCO Holdings Inc., Porter waxay ku shaqaysaa duulimaadyo joogto ah oo u dhexeeya Toronto iyo meelaha Kanada iyo Maraykanka iyadoo adeegsanaysa Canadian-dhisay Bombardier Q400 diyaarad turboprop.